TemplateShock, maodely maherin'ny 600 azo ovaina maimaimpoana ho an'ireo matihanina sy orinasa | Famoronana an-tserasera
Jesus Arjona Montalvo | | Graphic Design, sary, Photoshop
TemplateShock, dia tranonkala iray izay misy mihoatra ny Modely famolavolana 600 maimaim-poana amin'ny karazany rehetra, na ho an'ny orinasa, na matihanina, na mpankafy famoronana sary. Ity pejy ity dia mitondra modely azo ovaina tanteraka, ary ity fanangonana ity dia mitondra izao manaraka izao: Modely ho an'ny nitohy, Modely ho an'ny triptychs, Modely ho an'ny faktiora, Karatry ny visita, Modely ho an'ny Logos, Modely ho an'ny taratasy, Modely ho an'ny Posters, Modely ho an'ny Menus, ary maro hafa.
1 Tohizo ireo môdely
3 Modely faktiora
4 Karatra fandraharahana
5 Môdely modely
6 Modely Taratasy
9 Folder Templates
10 Modely amin'ny afisy
11 Karatra fandraharahana
12 Modely tolo-kevitra
Tohizo ireo môdely
Ity fonosana goavambe ity dia misy maodely CV mihoatra ny 30 Vonona ny misintona, mampiditra endritsoratra ao anaty endrika mahazatra indrindra izy rehetra. Izy ireo dia fomba tsara hanehoana ny fahaizanao, ny fahalalanao ary ny zavatra iainanao. Ampidiro ireo rakitra loharano hahafahanao manova azy mora foana Photoshop, Illustrator na InDesign.
ireo modely bokikely maimaim-poana Manome anao endrika maro izy ireo izay haneho vaovao haingana momba ny orinasanao, ny hetsikao, ny tetikanao na hampita hafatra izay heverinao ho zava-dehibe fotsiny. Satria azo aforitra ireto efitrano ireto, mahomby amin'ny habaka ary vetivety dia afaka manome hevitra tsara ho an'ny mpamaky ny zavatra ezahinao hampitaina ianao. Misafidiana mihoatra ny Drafitra 30 hafa, azo ovaina daholo Photoshop, Illustrator ary InDesign.
Na dia efa nahavita niasa ho an'ny mpanjifanao aza ianao dia zava-dehibe ny hitazomana sary tsara mandra-pahatongan'ny minitra farany hahalalana fa miverina izy ireo, ary manoro hevitra ny hafa hiara-miasa aminao aza. Navelany izy ireo a faktiora manintona mijery tsara ho an'ny mpanjifa. Azo ovaina daholo ny Photoshop, Illustrator ary InDesign.
ny karatra fandraharahana mety ho fomba tsara fampahafantarana ireo mety ho mpanjifa amin'ny orinasanao, ary hisy fiatraikany tsara ho azy ireo, izany no antony nanaovan'izy ireo an'ity fonosana tsara ity maodely maherin'ny 100 ho an'ny karatra fandraharahana, vonona hampiasa sy hampifanaraka ny zavatra tadiavinao, dia azo ovaina tanteraka amin'ny endrika 3 samy hafa izy rehetra: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ary InDesign.
El Logo Ny fandraharahana dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra hanehoana ny sarinao, izay hita taratra mivantana amin'ireo mpiara-miasa na mpanjifanao amin'ny ho avy. Mba hahatonga ny zavatra hanaitra kokoa, dia io angamba no zavatra voalohany hitan'ny olona rehefa miditra amin'ny tranonkala izy ireo, ary tsy maintsy atao ny mitondra fiantraikany mahery vaika hatramin'ny voalohany. Aza matahotra fa izany ianao modely logo maimaim-poana dia hanampy anao hahatratra izany. Ity fanangonana ny maodely logo maherin'ny 100 azo ovaina tanteraka izy ireo (PSD), InDesign (INDD) ary Illustrator (AI), maimaim-poana ny misintona ary vonona ny hanonta.
ireo modely taratasy maimaimpoana, hahafahanao mifampiresaka araka ny tokony ho izy amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Raha mila mandefa fampahalalana manan-danja amin'ny orinasa iray amin'ireo mpiara-miasa aminao ianao, na iray amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao izay mila hafatra tsotra sy tsotra, dia azonao atao ny miantehitra amin'ireto maodely ireto hanehoana ny hafatrao. Toy ny mahazatra ao amin'ny TemplateShock, miaraka amin'ny azy ireo izy ireo Kaody kaody loharanom-pahalalana tsirairay amin'izay ianao afaka manao ireo fanitsiana farany alohan'ny fandefasana.
Ireo flyers dia fomba tsara hanetsehana fampahalalana fohy. Izy ireo dia mety ho loharanom-pahalalana ilaina amin'ny fampiroboroboana ny hetsikao, ny vokatra sns. Izany no mahatonga an'ity fanangonana ity mihoatra ny Modely 30 vonona halefaIzy rehetra dia tonga amin'ny rakitra PSD, AI ary InDesign azo ovaina tanteraka hanovana araka izay itiavanao azy, ny endritsoratra dia nopetahany takelaka ary nomena anarana araka ny tokony ho izy.
Manaova fanandramana mpanjifa matsiro hatrany am-piandohana amin'ny iray amin'ireto modely menio maimaim-poana. Anisan'izany ny sakany karazana loko, endrika ary sary masina Azo antoka fa hisarika ny sain'ireo ho tonga hisakafo izy ireo. Mazava ho azy fa samy mampiditra rakitra loharano avokoa izy ireo mba hahafahanao manampy ny endrika farany amin'ny endrika ivelany tianao hifanaraka amin'ny orinasanao, ary soraty ireo resinao, zava-pisotro ary tsindrin-tsakafo rehetra.
Arovy ao anaty lahatahiry ireo sombin-tsoratra vita pirinty, ary ampiharo ny endrika fanao mifanaraka amin'ny tetikasanao na ny orinasao amin'ireto maodelin'ny fampirimana maimaimpoana ireto. Mety amin'ny bokikely, orinasa ary maro hafa. Ny singa tsirairay dia omena miaraka amin'ireo rakitrao loharano tsirairay avy mba hahafahanao manitsy azy ireo ary mahazo antoka fa maneho ny fikasanao sy ny fombanao araka ny tena tianao ireo lahatahiry.
Modely amin'ny afisy
Ny famantarana tsara apetraka amin'ny arabe na tranobe be olona dia mety hahasarika olona an-jatony. IRETO modely afisy maimaimpoana izy ireo dia mety ho namanao akaiky indrindra rehefa mamolavola ny sarin'ny orinasanao manaraka na ny hetsika. Ampidiro ireo rakitra voalohany mba hanampiana anao hamolavola azy araka ny itiavanao azy. Azonao atao ny manova ireo modely ireo, ny lokony, ny endriny ary ny endriny isan-karazany, rehefa tonga amin'ny endrika PSD, AI ary InDesign izy ireo.
ny karatra fandraharahana dia mety ho fomba tsara hampahafantarana ireo mety ho mpanjifa amin'ny orinasanao ary hisy fiatraikany tsara ho azy ireo, izany no antony ananantsika ity fonosana tsara ity mihoatra ny Modely karatra 100, vonona hampiasa sy hampifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao, ny modely rehetra dia azo ovaina ao Endrika samihafa 3: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ary InDesign.
Raha manana tetikasa vaovao mahafinaritra ianao, saingy tsy manana ny enti-manana na ny mpiara-miombon'antoka aminy hanatanterahana izany, ireo modely ireo dia tsara amin'ny fampisehoana amin'ny olona ny zavatra tianao hatao, ary ny famitana azy. Moa Modely 30 amin'ny endrika PSD, AI ary InDesign.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » TemplateShock, maodely maherin'ny 600 azo ovaina maimaimpoana ho an'ireo matihanina sy orinasa
Cv Mpamorona craft-cv.com/generator/?l=fr
Mamaly an'i kate
Andre Rivera dia hoy izy:
Salama, ny modely dia tsy mamela ahy hampidina azy ireo amin'ny google +, tsy mahazo na inona na inona ao amin'ilay pejy aho satria mety hitranga izany
Valiny tamin'i Andres Rivera
Ny WIX dia mamela anao hamorona tranokalanao mora foana ary maimaim-poana izany